Al-Qaacida Oo War kasoo saaray Coronavirus Baaqna u dirtay Reer Galbeedka. – Radio Alfurqaan | Xarunta Wararka Sugan
Al-Qaacida Oo War kasoo saaray Coronavirus Baaqna u dirtay Reer Galbeedka.
On Apr 5, 2020 552 0
Mu’assasada warbaahineed ee As-Saxaab ayaa baahisay bayaan kasoo baxay hogaanka sare ee Mujaahidiinta Al-Qaacida, kaas oo looga hadlayo cudurka Coronavirus ee faraha ba’an ku haya caalamka gaar ahaan wadamada reer galbeedka.
Bayaankan oo ku qornaa luuqadaha Carabiga iyo English-ka, islamarkaana ka kooban 5 page ayaa waxaa ciwaan looga dhigay “ Sida ay Banii Aadamku kaga bixi karaan caloosha Nibiriga” waxaana lagu soo gudbiyay talooyin ku socda Muslimiinta iyo xitaa dadka gaalada ah.
Ugu horeyn waxaa bayaanka lagu sheegay in dhibaatada uu keeney cudurka Coronavirus ay tahay mid ballaaran, islamarkaana uu dhulka la galay dhaqaalihii caalamka, dadkana uu ka dhigay kuwa aan kasoo bixin guryahooda, kurbada iyo murugaduna ay hareysay guud ahaan Caalamka.
Wuxuu bayaanka kasoo baxay hogaanka sare ee Mujaahidiinta Al-Qaacida si gaar ah u xusay in Coronavirus uu burburiyay dhaqaalihii Maraykanka, kaasoo todobaadyo gudahood khasaaray 2 Trillion oo dollar, oo ka dhigan khasaaraha Maraykanka ku gaaray dagaalka labaatan sano jirsaday ee uu kaga jiro wadamada Caalamka Islaamka.
Mujaahidiinta Al-Qaacida waxay bayaankooda uga hadleen iney jirto asbaab keentay in cudurka Coronavirus uu soo gaaro qaar kamid ah wadamada caalamka Islaamka, dadkana looga baahanyahay iney Allaah u towbad keenaan.
“ Waxaa xaq ah inaan dhahno in cudurka Coronavirus uu soo gaaro wadamada Muslimiinta ay sabab u tahay waxaan ku kasbannay gacmaheena, iyo fogaanshaha aan ka fognahay manhajka Allaah ee uu inoo dooray, fujuurka iyo faasiqnimadu waxay gaartay mele fog marka laga hadlayo wadamada muslimiinta, xafadlaha qaawanaanta iyo liidnaantuna waxay gaareen meeshii ugu dahirsaneyd ee ah dhulka Xarameynka” ayaa lagu yiri bayaanka kasoo baxay hoganaka saree e Mujaahidiinta Al-Qaacida.
Wuxuu bayaanka intaa ku darayaa in qaar kamid ah dhibaatooyinka ay maanta la noolyihiin Muslimiinta ay horey u dhadhamiyeen dadka Mujaahidiinta ah, tusaale xiritaanka masaajidda oo ay ka dhalatay inaan salaadihii Jamaacada la oogin, waxay arintaas horey u heystay Mujaahidiinta, oo hogaamiyaashoodu ay ku adagtahay in masaajidda ay kusoo tukadaan, sababo ku aadan culeesyada amni iyo weerarada uga imaanaya dowladaha Reer galbeedka.
Culimada Muslimiinta iyo Duacaada ayuu bayaanku ugu baaqay iney dadka waaniyaan, kuna xiraan Allaah Cazza wajalla, kuna dhex faafiyaan caqiidada saxan, Jihaadka wadada Allaah, iyo in loo towbad keeno Allaah SWT.
“ Si lamid ah sida aan dadka Muslimiinta ah ugu baaqeyno iney towbad keenaan, Ayaa Mujaahidiinta ku sugan Thuquurta waxaan ugu baaqeynaa iney towbad keenaan, Naftoodana xisaabiyaan, dibna u fiiriyaan howlahooda, oo ay ka towbad keenaan dembiyada ka dhacay” ayaa lagu yiri bayaanka kasoo baxay hogaanka sare ee Mujaahidiinta Al-Qaacida.
Dhinac kale, wuxuu bayaanku fariin dacwo iyo iney diinta Islaamka soo galaan u diray guud ahaan shucuubta Reer galbeedka ee aan heysan diinta Islaamka, iyadoona loo tusaaleeyey xaqnimada diinta Islaamka.
“ Shucuubta Reer galbeedka, tani waa Awoodda Allaah oo aad ku aragteen martidadan liidata ee noo timid, islamarkaana aan la arkeynin, waxay tani idin tahay fursad kale oo aad uga fakari kartaan xikmadda ku jirta sheygan taagta daran, Allaahna wuxuu idin tusay in muuqaallada awoodeed ee aad ku faaneysaan aaney ka hortagi Karin askariga ugu yar ee kamid ah askarta Allaah Cazza Wajalla” ayaa lagu yiri bayaanka As-Saxaab.
“ U arka cudurkan inuu digniin idin yahay, una soo laabta Fidhradiina iyo Allihiina, Aduunyadu waa mid dhamaaneysa, xisaabta jirta maalinta Qiyaamana waa mid adag. Waxaan halkan si cad idin kugu sheegeynaa inaan aad u jecelnahay inaad nagula bahowdaan Janno uu ballaceedu la egyahay cirka iyo dhulalka. Si lamid ah sida aan ugu bahowney Aduunkan Ayaan u jecelnahay- Allahna uu marqaati nooga yahay- inaan ku midowno nolosha aan dhamaadka lahayn anagoo ku sugan Jannada, sidaas darteed waxaan idin kugu baaqeynaa inaad barataan diinta Islaamka oo aad soo gashaan, gelitaanka diintan waxaad ku heleysaan liibaanta aduunyo iyo tan Aakhrio” ayaa lagu yiri bayaanka.
Bayaankan dacwiga ah ee kasoo baxay hogaanka sare ee Mujaahidiinta Al-Qaaicda ayaa imaanaya iyadoo cudurka Coronavirus uu kusii baahayo caalamka, dowladihii sheegan jiray awoodana ay u taag la’yihiin iney maareyntiisa, sida Maraykanka, waxaana dad badan oo ducaad ah ay sheegayaan in cudurkan uu yahay mid kamid ah ciidamada Allaah, marka loo eego sida uu halakeeyey dadka gaalada ah, sidoo kalena ay muslimiintu la gudboontahay iney Allaah u towbad keenaan.